Tamarta Maalgelinta Tamarta Khatarta ah, Dayactirka ama Adeegga - Tamarta Ku Guurtida
Home > Kuleylka iyo kuleyliyaha > Dib-u-cusbooneysiinta Boostada iyo Adeegga
Noockayaga si buuxda loo rakibay Gaaska, Saliida ama LPG ee kuleyliyaha ku siinayaa tayada ugu fiican ee qiimo weyn. Dhibaatada dhaqaale ee Boorsada waxaa lagu faafin karaa kharashka kuleyliyaha cusub dhowr sano.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dalabka Maaliyadda.
Ku badal digsigaaga
Haddii aad kuleylaha tahay wax ka badan 8 sano waxay u shaqayn kartaa si waxtar leh. Waxaad beddeli kartaa kuleyliyehaagii hore adoo adeegsanaya tamar cusub. Sida laga soo xigtay Energy Saving Trust oo badalaysa Geeska lagu qiimeeyo G-da leh ee leh "boorsada" ee lagu qiimeeyo lacagahaaga ayaa ku badbaadin karta £ 340 sannadkii. Riix halkan si aad faahfaahin dheeraad ah.
Haysashada kuleyliyahaaga sannadkii kasta, macneheedu waa inaad ilaaliso dammanadeeda oo ay sii socoto.
Waxaan bixinnaa adeeg sanadle ah oo kuleyliyahaaga ah £ 78. Mashiinadaheena HETAS, OFTEC iyo Gaas ayaa loo aqoonsan yahay inay ku siiyaan niyadda nabadda.
Na soo wac 0800 0 246 234
Waxaad sidoo kale xiiseyn kartaa nooadeegyada dhismaha ee ka shaqeeya Cornwall.
Waa maxay nooca kululeeyaha la heli karo?
Kuleyliyaha kuleylkawaa kuwa ugu badan caanaha gaasiga ah ee suuqa. Waxaa jira noocyo kala duwan oo kuleyliya kuleyliya, oo ay ku jiraan kombuyuutarka kuleylka ah oo leh unug biyo kulul iyo haanta biyaha qabow, taas oo u oggolaaneysa kuleylkaaga kulul iyo kuleylka inay ka yimaadaan cutub isku mid ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira fursado kale. Haddii aad ku nooshahay shabakada gaasta ee gaaska LPG or kuleyliyaha saliidda waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ugu fiican. Kiimikada dabiiciga ah waa hab kale oo wanaagsan, lakiin qiimahoodu waa yar yahay si loo ordo. Kuleyliyeyaasha miyir-beelka ayaa sidoo kale ah ikhtiyaari guryaha guryaha. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kuleyliyaha nafleyda.
Noocyo noocee ah ayaan ku rakibnaa?
Waxaan ku rakibnaa Vaillant, Worcester Bosch, Ideal iyo Vokera.
Maxay dooranaysaa Tamarta Maalintaada cusub?
La-talin guri oo bilaash ah, waxan soo jeedinaynaa alaabta ku habboon.
Qalabyadeenu waxay yihiin dhammaan injineerada Badbaadada Gaaska qaar ka mid ah boorsooyinkayaga waxay la yimaadaan shuruudo 10 sanadka.
Dalabkeena maaliyadeed ayaa kaa caawin doona inaad ku faafiso kharashka.
Mashiinadeennu waa xirfadle, saaxiibtinimo iyo dareen.